Kidnapping teny Soavimbahoaka : Vehivavy ny roa amin’ireo voasambotra !
Sakafo hariva 10 mampihena
Tsy vahaolana mihitsy ny tsy misakafo hariva raha tena te-hihena amin’ny fomba mahomby sy ara-pahasalamana. Maro karazany koa ny sakafo azo hohanina tsara ny hariva raha te-hampihen-tena. Santionany ireto :
Vehivavy miisa roa sy lehilahy iray no nalefa vonjimaika eny amin’ny fonjan’Antanimora noho ilay resaka fakana ankeriny nahazo ilay teratany karana, Navaze Veledjee tompon’ny orinasa Vel’optic niseho ny 13 desambra lasa teo.
Rehefa avy nohenoina teny amin’ny Pole Anti-Corruption na ny PAC ao 67ha ny vehivavy miisa telo sy ity lehilahy iray ity, dia nalefa vonjimaika ho tazonina any amin’ny fonjan’Antanimora ny roa amin’ireo vehivavy miaraka amin’ilay lehilahy iray. Ilay vehivavy iray hafa kosa dia nahazo fahafahana vonjimaika aloha mandra-piandry ny tohin’ny raharaha. Araka ny fantatra kosa dia mbola maromaro ny olona voarohirohy amin’ity fakana an-keriny an’ilay tera-tany karana Navaze Veledjee tamin’ny 13 desambra lasa teo ity. Efa eo an-dalam-pikarohana ireo olona maro hafa ireo ny mpitandro ny filaminana araka ny fantatra ary ny sampana mpanao fikarohana mikasika ny heloka bevava ao Fiadanana no misahana ny raharaha. Raha tsiahivina dia ny 13 desambra lasa teo no nisy naka an-keriny teny Soavimbahoaka ity tera-tany karana mizaka ny zom-pirenena frantsay, tompon’ny Vel’optic ity. Tsy vao voalohany anefa izany fa efa nisy naka an-keriny koa ny tenany tany amin’ny 24 mey 2018 tany ka teny Ampasapito indray no nisehoan’izany, niaraka tamin’ny vadiny. Navotsotr’ireo olon-dratsy teny an-dalana anefa ny vadin’ity karana ity tamin’izany ka izy irery no notanan’ireo mpaka an-keriny azy. 15 andro taty aoriana vao votsotra ity tera-tany karana ity tamin’izany.